Articles – Page 2 – Dooxo Diaspora Forum – Golaha Qurbo Joogta Dooxa
Fanaanaddii Seynab Xaaji Cali Baxsan oo ku Geeriyootay Muqdisho
Articles News Opinion World
Allah u naxariistee waxaa goor dhow magaalada Muqdisho ku geeritootay Seynab Xaaji Cali Baxsan oo kamid aheyn fanaaniintii hore ee Soomaaliyeed.
Sanab ayaa muddooyinkii dambe waxaa ay ku xanuunsaneyd gudaha magaalada Muqdisho, iyadoo ugu dambeybn maanta u geeriyootay xanuunka ay la dhul jiif dhowaanahaan.
Allah u naxariistee fanaanadda ayaa waxaa ay kamid aheyd kuwii aan ka bixin dalka tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaana ay ka tirsaneyd hoboladii qaranka Waabari.
Madaxweynaha dowlad goboledka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-Gareen ayaa maanta furay Kal-Fadhiga labaad ee golaha wakiillada Koonfur Galbeed isagoo khudbadiisa furitaanka kaga hadlay dhinacyo kala duwan iyo waxyaabaha uqabsoomay mudada Sanadka iyo Bilooyinka ah uu xilka haayey.
Ugu horayn Madaxweynaha ayaa Xildhibaanada uga warbixiyay Xaalada Koonfur Galbeed iyo Dadaalada lagu bixinayo sidii looga miradhali lahaa fulinta himilooyinka shacabka waxaana uu xusay madaxweynaha guulaha Laga gaaray amniga,xureynta degmooyinka,Tayeynta iyo tawabarida ciidanka,fulinta howlgalada socda.
Laftagareen ayaa sidoo kale Xildhibaanada Warbixin ka siiyey Dib-udhiska Magaalooyinka hirgelinta Mashariic kala duwan sida Biyooley,Bahnaano,GPLG iyo kuwo kale kuwaasi oo Laga fulinayo guud ahaan Gobolada Baay,Bakool iyo Shabeelaha Hoose.
Sidoo kale Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa sheegay in Safaradii uu ku tagay Degmooyinka Koonfur Galbeed ay ahaayeen kuwo uu ugu kuuragalayey Xaaladaha Degmooyinka Waxaana uu xusay in lagu guulaystay in Degmooyinka laga fuliyo Mashariic kala Duwan oo Bulshada Muhiim uah Sida Waxbarashada,Cafimaadka,Dib udhiska Xarumaha Dowlada IWM sidoo kale Madaxweynaha ayaa Xusay in lagu guulaystay in la hormariyo Dhaqaalaha Koonfur Galbeed lagana Dareemayo Isbedel Hormarineed
Dhanka kale Madaxweynaha ayaa sheegay in Arimaha Doorashooyinka heer Federaal laga gaaray heshiis dhab ah kaas oo dhabaha u xaaraya sidii dalka uu ugu jihaysan lahaa Doorashooyinka 2020/2021 taas oo ah wado aan la dhaafi karin oo sal iyo tariikh lagu yaqaano ah dowladnimadeena in afartii sanaba hal mar ay dhacdo Doorasho dalka.
“Arrimaha doorashooyinka heer federaal waxaa laga gaaray heshiis dhab ah, kaas oo dhabaha u xaaraya sidii dalka uu ugu jihaysan lahaa doorashooyinka 2020/2021-ka taas oo ah wado aan la dhaafi karin oo sal iyo tariikh lagu yaqaano ah dowladnimadeena in afartii sanaba hal mar ay dhacdo doorasho dalka u jihaysa wadada hormarka” ayuu yiri madaxweynaha Koonfur galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen.
Ugu danbayntii Madaxweynaha ayaa uga mahad celiyay Golaha Wakiilada Koonfur Galbeed shaqooyinka waxtarka leh ee ay hayaan isagoo si rasmi ah u furay Kal-fadhiga Labaad ee Golaha Wakiilada Koonfur Galbeed.
Ra,iisalwasaare Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa goordhow oo caawa waxaa uu ku dhawaaqay golaha wasiirrada cusub, kuwaas oo ka la shaqeyn doona.
Wasiirrada la magacaabay ayaa waxaa ku jiro tiro yar oo cusub , halka in badan dib loo soo celiyey wasiirraadii la soo shaqeeyey Xasan Cali Kheyre.
Qoor Qoor oo agaasime cusub u mgacaabay madaxtooyada GALMUDUG
Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug, Mudane Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor) ayaa maanta magacaabis sameeyey, kadib wareegto ka soo baxday xafiiskiisa.
Qoor Qoor ayaa agaasimaha cusub ee madaxtooyada maamulkaasi ee Dhuusamareeb u magacaabay, Mudane Cusmaan Macallin Xasan oo ah aqoonyahan xirfad dheer u leh arrimaha maamulka & horumarinta dhaqaalaha.
Cismaan oo ah nin dhalinyaro ah ayaa sidoo kale sanadyadii u dambeeyey ahaa guddoomiyaha Jaamacadda Caalamiga Soomaaliya (SIU).
Sidoo kale waxaa digreetadan lagu shaaciyey in magacaabistan ay timid, kadib markii madaxweynuhu garowsaday baahida degdega ah ee loo qabo dardargelinta hawlaha hortabinta leh ee madaxtooyada Glamudug.
Halkan hoose ka aqriso wareegtada:
Wareegto ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye ‘Qoorqoor’ ayaa Md Cusmaan Macallin Xasan loogu magacaabay Agaasimaha Guud Ee Madaxtooyada Galmudug.
Cusmaan Macalin ayaa ah aqoonyahan xirfad dheer u leh arrimaha maamulka & horumarinta Dhaqaalaha. Isagoona kasoo shaqeeyay dalka iyo dibadaba.
Wuxuu ka mid ahaa aqoonyahankii Soomaliyeed ee dadaalka mugga leh ku baxshay soo kabashada waxbarashada hoose iyo midda sare ee dalka. Isagoona sanadyadii dambe ahaa Guddoomiyaha Jaamacadda Caalamiga Soomaaliya (SIU).
Magacaabistaan ayaa soo baxday kaddib markii Madaxweynuhu garowsaday baahida degdega ah ee loo qabo dardargelinta hawlaha hortabinta leh, isla markaana tixgeliyey kartida, aqoonta iyo waayo aragnimada masuulkan u leeyahay arrimaha maamulka & maareynta.
Ilhaan Cumar oo shaacisay qorshe uu damacsan yahay Trump oo ‘halis ku ah’ nolosheeda
Ilhaan Cumar oo ka tirsan golaha Congress-ka dalka Mareykanka ayaa jawaab kulul ka bixisay eedeyntii uu dambeysay oo uu u jeediyey madaxweyne Donald Trump oo ay isku hayaan arrimaha siyaasadda ee wadankaasi.
Qoraal ay Ilhaan soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayey ku sheegtay in weerarada ay kala kulanto iyada & siyaasiyiinta kale ay yihiin kuwa shirqool ah, sida ay hadalka u dhigtay.
Ilhaan oo sidoo kale tixraaceysay eedeyntii uy Trumo uga jeediyey ololihii la qabtay Jimcihii la soo dhaafay ayaa sidoo kale sheegtay inuu weerar ku hayo nolosheeda gaarka ah.
“Weerarada is-daba jooga ah ee aan kala kulano Trump waa kuwo shirqool ah ee aniga iyo siyaasiyiinta kale ee haweenka ah ee caanka ah maaha kaliya ragga,” ayey tiri.
Sidoo kale waxay intaasi ku dartay in hanjabaadyada uu u dirayo madaxweynaha ay is-daba joog noqdeen muddooyinkii u dambeeyey, taan oo ka dhan ah nolosheeda.
“Tan waxay u horseedayaan hanjabaado is-daba joog ah oo ka dhan ah nolosheena,” ayey sii raacisay Ilhaan Cumar.
Si kastaba waxaa muddooyinkii la soo dhaafay sii kordhayey eedeymaha kulul ee ay dhanka warbaahinta isku marinayeen madaxweyne Trump iyo Ilhaan Cumar oo dagaalkooda siyaasadeed soo billowday. kadib markii Trump loo doortay madaxweynaha Mareykanka.
Ciidamada ammaanka oo baro koontorool oo hor leh ka sameystay Muqdisho + Sawirro
Ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyey kordhiyey baraha koontarool ee ku yaalla magaalada Muqdisho, kuwaas oo lagu baaro gaadiidka isaga kala gooshaya caasimadda.
Taliyaha Booliiska Soomaaliyeed, General Cabdi Xasan Xijaar iyo saraakiil kale ayaa xalay booqday fariisimahaasi oo ay ciidamadu ka sameysteen isgoysyadii dhowaan laga qaaday dhagxaanta.
Booliiska ayaa bilaabay kadib wixii ka dambeeyey qaadida dhagxaanta inay la socdaan dhaq-dhaqaaqa baabuurta, iyada oo kuwa dadweynaha celinaya jidadka muhiimka ah.
Xijaar oo ka warbixiyey booqashadiisa ayaa tilmaamay inay xalay kormeereen ilaa 15 baro koontoroolool oo ku yaalla inta u dhaxeysa bariga Muqdisho ee degmada Kaaraan, illaa galbeedka caasimada oo ah degmada Kaxda ee gobolka Banaadir.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in ujeedka uu ahaa sidii loola socon lahaa howl-gallada iyo baaritaanada ay wadaan ciidamada Booliiska Soomaaliyeed.
“Waxa aan kormeernay waddooyinkii dhagaxaanta aan ka qaadnay 5-cishe kahor, sidoo kale waxa aan qiimeyneynay kontoroolada cusub ee duleedka caasimadda dhaca iyo kuwa gudaha Degmooyinka Muqdisho si aan usoo ogaano isbadalka jira, Askarta waa in ay hubiyaan dadka balse waa in aan la dhibin, waana in loo turaa loo naxariistaa, ” ayuu yiri taliyaha guud ee ciidamada Booliiska Soomaaliyeed.
Taliye Xijaar oo hadalkiisa sii wata ayaa saraakiisha ciidamada kula dar-daarmay inay xoojiyaan waajibaadka ka saaran sugida amniga, islamarkaana ay u turaan shacabka.
Dowladda Soomaaliya oo isku diyaarineyso doorashada soo socota ee 20/21 ayaa wada howlo lagu xaqiijinayo amniga caasimada, si looga hortago falalka liddiga ku ah amniga.
Sacuudiga oo ku ceeboobay cod-bixin ka dhacday QM
Saudi Arabia ayaa Talaadadi ku guul-darreystay inuu xubin ka noqdo, Golaha Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay, hase yeeshee waxaa Golahan oo ka kooban 47 waddan ka mid noqday dalalka si aad ah ugu tuntay xuquuqda aadanaha oo ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Ruushka.
Doorashada lagu soo xulay xubnaha cusub ee Guddiga Xuquuqda Aadanaha ee QM oo aheyd mid qarsoodi ah, ayaa waxaa shalay ka mid noqday dalalka Bolivia, Britain, China, Cuba, France, Gabon, Ivory Coast, Malawi, Mexico, Nepal, Pakistan, Russia, Senegal, Ukraine iyo Uzbekistan.
Dalkaas ayaa saddex sano mid ahaan doona Golaha, waxaana muddo xileedkooda uu u billaaban doonaa koowad bisha Jannaayo ee sannadka 2021.
Sacuudiga oo dhaqaale xoogan ku bixiyo QM, ayay khubarradu sheegeen, inuu ku waayay kursiga uu u tartamay, dagaalka uu ka wado Yemen oo sababay masiibo bani,aadannimo tii ugu xumeyd ee aduunka lagu arko sannadihi dhawaa, iyo dilkii wariye Jamal Kashikji oo lagu eedeeyay inuu amarkiisa lahaa dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga, Maxamed Bin Salman.
Ka mid noqoshada dalalka Shiinaha iyo Ruushka ay ka mid noqdeen Golaha Xuquuqda Aadanaha ee Shiinaha, ayaa cambaareyn xoogan kala kulmay hey’adaha caalamiga ah ee xuquuqda aadanha.
Orodyahan Mo Farah oo xil looga dhiibay dalka Jabuuti
Maxamed Faarah oo loo yaqaano (Mo Farah) ayey dowladda Jabuuti u magacowday Safiirkooda Maamulka Dekeddaha iyo aagga xorta ah (DPFZA).
Dowladda Jabuuti ayaa dib u qaabeyn ballaaran ku sameyneysa hanaankeeda ayaa marso taariikhi ah u rogtay degmo ganacsi, xafladii arintaas lagu maamuusayay ayey uga dhawaaqeen magacaabista Mo Farah.
Waxaan ku faraxsanahay inuu nagala soo qeyb galo Mo Farah xaflada lagu daah furayo dib u cusbooneysiinta Dekeda Jabuuti. DPFZA waxay ku faraxsan tahay in Sir Mo uu noqdo safiirkeenna, waxaana rajeyneynaa inaan iska kaashanno mashaariicda mustaqbalka” ayaa lagu soo qoray twitter-ka.
“Cilaaqaadka Jabuuti iyo Mudane Mo Faarax waa mid qoto dheer, waxaan ku faaneynaa in aan si wadajir ah uga shaqeyno si aan u soo bandhigno awoodaha aan la shaacin ee qaaradda Afrika” ayaa la raaciyay.
Ciyaariyahankaan dunida rikoorada ka dhigay ayaa ku dhashay Gabiley oo ka tirsan dhulka Somaliland, waxaana la ogyahay iney Jabuuti kula tartanto dhanka dekeddaha, taasna waa sheeko xiiso leh.
Ismaaciil Cumar Geelle oo qudbad laga siiyay furitaanka munaasabadda ayaa sheegay iney dowladiisa bilowday hiigsigooda 2035, wuxuuna doonayaa in dalkiisa noqdo xarun udub dhexaad u ah ganacsiga dunida.
Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland Iyo Taiwan, Oo Fariimo Diblomasiyaded Is-dhaafsaday
Madaxweyne ku-xigeenka dalka Taiwan ayaa hadallo u muuqda kaftan iyo muujinta xidhiidhka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya dalkiisa iyo Somaliland waxa uu bartiisa twitter ugu qoray Madaxweyne ku xigeenka Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici) William Lai Ching-te oo ah Madaxweyne ku-xigeenka Taiwan ayaa isaga oo ka jawaabaya hambalyo uu Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland bartiisa twitter ka